Soso-kevitra momba ny marika hitazomana ny fahana amin'ny Twitter Twitter Martech Zone
Asabotsy, Aogositra 16, 2014 Asabotsy, Aogositra 16, 2014 Douglas Karr
Nanao zavatra vitsivitsy izahay mba hanamafisana ny fifandraisanay Twitter tato ho ato. Mino aho fa ny ekipa tao amin'ny Twitter dia nahery setra kokoa tamin'ny fanatsarana ny kalitao sy ny fandroahana ireo spam ... ary miseho io. Amin'ny Martech Zone amin'ny twitter kaonty, niasa izahay mba hitady sy hanaraka kaonty vaovao, hizara vaovao malaza manerana ny tranonkala, hanampy sary sy horonan-tsary hanamafisana ny fifandraisanay, ary hanara-maso akaiky kokoa ny tatitra ataonay.
Ny marika amerikana antonony dia mandefa bitsika 221 isan-kerinandro. Ny bitsika tsirairay dia fotoana iray hifaneraserana mivantana amin'ny mpanjifa; fa raha fampiroboroboana tena fotsiny izy ireo dia mety hahavery ny sain'ny mpihaino ny marika. Raha ny marina, 61% ny olona no nilaza fa nanapaka ny fifamatorany ara-tsosialy tamin'ny marika tsy manome azy ireo atiny mifandraika amin'izany. Na dia ny fizarana marina aza dia miovaova amin'ny asa aman-draharaha, isan'andro isan'andro ary na dia isa-minitra aza - ny fifangaroana atiny voafantina mifono atiny voafaritra dia hamorona marika matanjaka miaraka amin'ny fisian'ny fiaraha-monina salama. Sproutsocial: mitazona fahana amin'ny Twitter ve ianao?
Ity infographic ity dia miresaka ny fandanjalanjan'ny tanjon'ny bitsikao. Aza adino ny mizara karazana bitsika isan-karazany… mankaleo be ny fahana Twitter raha tsy misy afa-tsy lohateny sy rohy tsy misy farany izany. Manampia resaka tsy misy rohy, mampakatra sary mivantana avy amin'ny app Twitter, ary ampifandraiso amin'ny Twitter ny kaontinao Youtube. Ary raha very ny mpanara-dia anao, zahao ny infographic malaza be, Maninona ny olona no manentsina anao ao amin'ny Twitter.
Tags: toro-marika marikatoro-hevitra twitter twitterfanabeazanasioka fanabeazanatwitter salamafifandraisanasioka ifandraisanabitsika manokanabitsika manokanabitsika fampiroboroboanamanan-danjabitsika mifandraikasocialcastTwittertoro-hevitra twitter
Tsy paikady ratsy ny fanodikodinam-baovao - Raha tsy hoe tsy mahay mandanjalanja